samsung j5pro/Samaung a5 /Samsung j7 အား ရန်ကုန် တွင်​ ipivi.com မှတဆင့်​ ဝယ်​ယူပါ။
samsung j5pro/Samaung a5 /Samsung j7
ရောင်းချသူ: အောင်မြင် ဖုန်းရောင်းဝယ်ရေး
လိပ်စာ သုဝဏ္ဏ ကျောင်းရှေ့မှတ်တိုင် သွားကောလိပ်အနီး
samsung. j5pro. Ram3.32gb no error ၉၈သန့်မယ်
Samaung a5..2016ram3.32gb noerror. အော်စီး
Samsung j7.2015 no error98 new
Oppo f5 lite. ram3.16gb ဝရံတီ၁၁လနီးပါးကျန်
Face lock လေးနဲ့အလန်းလေးcarema အဝါးလည်ရိုက်လို့ရသည် အသစ်တိုင်းကိုင်ကမယ် ပစ္စည်းစုံ
အမည်: samsung j5pro/Samaung a5 /Samsung j7